Horudhac: Arsenal vs Burnley… (Bukayo Saka oo galabta taariikh u dhigi kara horyaalka Premier League) – Gool FM
(London) 23 Jannaayo 2022. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kulammada maanta horyaalka Premier League kula balansan naadiga Burnley iyadoo naadiga Macallin Mikel Arteta ay heysato fursad ay booska afaraad ku imaan karto haddii ay galabta guul hesho.
Gunners ayaa haatan ku jirta kaalinta toddobaad ee jadwalka kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 35 dhibcood, waxayna guul ay gaarto ka dhigi kartaa inay 38 la yeelato Manchester United oo xalay 38 dhibcood yeelatay, Arsenal ayaase u baxsaneysa farqiga goolasha ee ay kaga sarreyso dhiggeeda, dhinaca kale, Burnley ayaa kaalinta ugu hooseysa ka fadhisa jadwalka kala sarreynta iyadoo leh 11 dhibcood, hase ahaatee, keliya 17 kulan ayay ciyaartay halka kooxda ay martida u tahay maanta ay dheeshay 20 kulan, xilli kulammadii 23-aad la ciyaarayo.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 05:00 Galabnimo xilliga Geeska Afrika.
Kooxda Arsenal ayaa weyneysa xiddigaheeda khadka dhexe ka ciyaara ee Thomas Partey iyo Granit Xhaka oo ganaaxyo ku seegaya kulankan halka Nicolas Pepe iyo Mohamed Elneny ay ku maqan yihiin tartanka qarammada Africa ee AFCON 2021, waxaana sidoo kale dhaawacyo ku maqan Cedric Soares iyo Calum Chambers.
Dhinaca kale, Burnley ayaa heysata kaliya 16 xiddig oo kooxda koowaad ah, waxaana tababarka kusoo laabtay haatan Erik Pieters, Johann Berg Gudmundsson iyo Dwight McNeil kuwaasoo kasoo caafimaaday xanuunka Korona Fayras, sidoo kale, Connor Roberts ayaa la filayaa inuu kulankan taam u yahay balse waxaa shaki la gelinayaa Charlie Taylor oo cagta dhaawac ka qaba halka Maxwel Cornet uu xulkiisa Ivory Coast kala qayb galayo tartanka qarammada Africa.
Guusha kaliya ee ay Burnley kaga gaartay horyaalka Ingiriiska dhiggeeda Arsenal 18-kii is arag ee lasoo dhaafay ayaa timid iyadoo marti ah, waxayna ku adkaatay 1-0 xilli ciyaareedkii hore.
Arsenal ayaa halis ugu jirta in la garaaco labada ciyaar ee ugu horreysa horyaalka iyadoo garoonkeeda ku ciyaareysa sanad cusub markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1962.
Gunners ayaa ah kooxda kulammada ugu yar gool looga hor maray horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan waana afar jeer, hase ahaatee, dhammaan kulammadii goolka koowaad looga naxsaday waa la garaacay.
Bukayo Saka, oo jira 20 sano iyo 140 maalmood, ayaa noqon karta xiddigii ugu da’da yaraa ee taariikhda Premier League gool dhaliya ama caawiya lix safasho oo xiriir ah. Waxa uu haatan dhaliyay afar gool isagoo labo kale caawiyay shantii ciyaar ee lasoo dhaafay.